UTİKAD Oo La Kulmay Qeybta Shirka Dhaqaalaha iyo Saadka | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulUTİKAD waxay la kulantay qaybta shirarka dhaqaalaha iyo saadka
16 / 05 / 2018 34 Istanbul, tareenka, GUUD, TURKEY
Shirka saddexaad ee Dhaqaalaha iyo Saadka ayaa waxaa abaabulay UTA Logistics Magazine sannadkan wuxuu ka dhacay May 14 May hoteelka Hilton Istanbul Bomonti. Shirweynahan, oo ay taageerayeen UTİKAD, Ururka Soosaarayaasha Adeegga Gaadiidka iyo Saadka ee Caalamiga ah, sida kafaala-qaadayaasha, magacyada hormuudka u ah waaxda dhaqaalaha iyo loojistikada ayaa isu yimid.
Shirka ayaa ahaa khudbadii furitaanka ee Emre Eldener, Gudoomiyaha Gudiga Agaasimayaasha ee UTİKAD oo maamushay kalfadhiga ugu weyn, mowduucyada isbadalka dijitaalka, fursadaha cusub ee dhaqaalaha iyo ajandaha qeybta saadka. Emre Eldener, Madaxweynaha UTİKAD, wuxuu taabtay horumarkiisa qeybta saadka ee Turkiga khudbadiisa wuxuuna yiri: “2018, miisaaniyada ay dowladdu u qoondeysay waxay na siisay rajo. Dhanka qaybta, waxaan aaminsanahay inaan sii kordhin doonno shirkadaha Turkiga ahna ay sii xoogeysan doonaan sidii ay u noqon lahaayeen magacyo caalami ah. ”
Gabagabadii shirku, kaas oo isugu keenay wakiilo matalaya shacabka, ururada aan dowliga aheyn iyo qeybaha kala duwan, waxaa lasiiyay xubno badan oo UTİKAD ah.
UTİKAD, Ururka Soosaarayaasha Adeegga Gaadiidka iyo Saadka ee Caalamiga ah ayaa la kulmay magacyada hormuudka u ah dhaqaalaha iyo waaxda lojistikada ee Shirweynihii 3aad ee Dhaqaalaha iyo Saadka oo ay qabteen UTA logistics Magazine sannadkan. Iyada oo la kaashanayo Wasaaradda Gaadiidka, Arrimaha Badda iyo Isgaarsiinta, Wasaaradda Dhaqaalaha, ururada qeybaha iyo ururada 14 May 2018 shir madaxeedka oo lagu qabtay Hilton Istanbul Bomonti Hotel, UTA Hagaaga Maareeyaha Saxaafadda Cem Ka Cmaz, UT UKAD Gudoomiyaha Emre Eldener iyo Maareeyaha Guud ee Duulista Rayidka Waxay ku bilaabatay khudbadaha furitaanka kaaliyeheeda Can Erel. Shirweynihii Eldener ee lagu habeeyay kalfadhigii koowaad ee ugu waynaa, UTİKAD gudoomiye kuxigeenka iyo gudoomiyaha gudiga ganacsiga ee 'DEİK Logistics' Turgut Erkeskin iyo xubin gudiga UTİKAD İbrahim Dölen iyo af haye, UTİKAD xubinta Gudiga iyo Gudoomiyaha Shaqada Wadada Ekin Tırman iyo gudoomiyihii hore ee UTİKAD Kosta Isuduwaha Sandalcı iyo xubin UTİKAD xubinta ka ah Serkan Eren ayaa kaqaybgalay af-hayeenka.
Emre Eldener, Gudoomiyaha UTİKAD, wuxuu carrabka ku adkeeyay in isdhaafsiga fikradaha iyo isfahamka labada dhinac ay faa iido weyn u tahay dhammaan saamileyda marka loo eego baaxadda Shirka Dhaqaalaha iyo Saadka halkaasoo wakiilo ka socda dowladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay ay isugu yimaadeen heer aad u sareeya oo yiri, "Awoodda ururada aan dowliga ahayn, kuwaas oo lama huraan u ah nolosha bulshada, nolosha dhaqaalaha. iyo sida ugu wax ku oolsan ee loo adeegsado mas'uuliyadda bulshada, faa'iidooyinka shaqsiyadeed iyo kan bulshada labadaba. Ururka adduunka ganacsiga wuxuu u oggolaanayaa ururinta dhibaatooyinka guud ee shirkadaha soo saarta adeegyada isla waaxda, soosaarista xalal maskaxda iyo wadaaga xallinta arrimahan dadweynaha. Waxay waddada u xaareysaa horumarka iyo xasilloonida kaabayaasha iyo qarankaba. Runtii aad ayaan ugu faraxsanahay inaan aragno kororka kaqeybgalka sanad kasta dhacdadan oo aad muhiim ugu ah waaxdayada ..
XAFLAD AADANAHAAGA WAA IN LAGU DIYAARIYO
Emre Eldener wuxuu carrabka ku adkeeyay in qaybta logistics ee Turkiga ay soo jiitay ku dhawaad ​​10 bilyan oo doollar oo maalgashi shisheeye ah sanadkii la soo dhaafay ee 2. In Turkey, share of GDP ee hawlgallada logistics warshadaha iyo logistics qaybta xnumx't boqolkiiba waa suurto gal in la yidhaahdo in ay gaareen size ee 4 billion pounds. Intaa waxaa dheer, qaybta saadka, oo ku maalgelisa 14 kun oo qof, waa aag shaqo oo muhiim u ah waddankeenna. Waxaa lagama maarmaan noo ah inaan sare u qaadno muhiimadda waddankeenna iyadoo aan xoojineyno mowqifkeenna ku aaddan suuqa adduunka annagoo qiimeynayna mowqifkeenna faa'iidada leh ee juqraafi ahaan aan ka qeyb qaadan karno cabbirka suuqa iyo fursadaha shaqo ee waaxda. Gegada Diyaaradaha ee Istanbul, furitaanka Khadka Baku-Tbilisi-Kars, maalgashiga dekedaha ee shirkadaha caalamiga ah, furfurnaanshaha wadooyinka tareenka iyo wixii la mid ah. Iyada oo la tixraacayo horumarintan, fursadaha kartida ayaa la buuxiyay si loo buuxiyo shuruudaha howlaha saadka. Bartilmaameedka ugu weyn waaxda logistics ee Turkiga waa in la helo inta ugu badan ee suuragalka ah waaxda saadka, taasoo gaartay heer ah "trillion trillion 150 dollars adduunka."
HORUMAR KU SAABSAN DHAQANKA GUDAHA
macluumaad International la xidhiidha qaybinta by share hab gaadiidka Eldener, "waxa uu ku yaalaa meel muhiim ah oo la tixgaliyo in gaadiid badda ee boqolkiiba 90 oo xamuul dunida oo dhan 8 kun 400 Kiiloomitir xeebta ah ee Turkey iyo bari-galbeed iyo waqooyi-koonfur ee wadiiqooyinka ganacsiga. Turkey ee gaadiidka badda ee xogta ku saabsan yahay 2017 400 million tons bishii November ilaa iyo dhamaadka markii xamuul baaro maareeyay. Iyada oo la adeegsanayo mashruuca 'One Generation One Way' ee Shiinaha, waxaa suurtagal ah in lugta badda ay si aad ah uga hawlgasho dalkeenna isla markaana xogtaasi si weyn kor ugu kacdo. Dhanka kale, xaqiiqda ah in waddankeenu uu udub-dhexaad u yahay maalgashiga dekedaha iyo dhismaha dekedaha u oggolaanaya maraakiibta xamuulka waaweyn inay sidoo kale kicin karaan kuwan si koror ah. Gaadiidka waddadu had iyo jeer waxay ahaayeen nooc gaadiid ahaan inta badan la adeegsado marka loo eego noocyada kale ee gaadiidka. Shabakada gaadiidka wadooyinka ayaa horumarinay wixii kahoreeyey ilaa iyo hada, iyo gaadiid wadooyinka ayaa laga doorbiday dabacsanaanta dhanka gaadiidka. Waddankeenna, oo leh mid ka mid ah maraakiibta ugu waaweyn ee Yurub, waxaa jira in kabadan kun gawaari 800 ah oo loo diiwaangaliyay taraafikada marka loo eego xogta TURKSTAT. ” Isaga oo tixraacaya duulista hawada, ayuu Madaxweynaha UTIKAD Eldener yidhi, eri Xogta guud ee Duulista Hawada waxay sheegaysaa in diyaaraddaha dalkeenna ay yihiin 540. Markaan eegno xogta caalamiga ah, waxaan aragnaa in boqolkiiba 1 ee wareejinta lagu fuliyo hawo, halka xagga qiimaha laga leeyahay, muggan wuxuu u dhigmaa boqolkiiba 40. In furitaanka 2018 qorshaysan ee wajiga hore ee garoonka diyaaradaha cusub ee Istanbul Turkey beerta gaadiidka hawada noqon doontaa xarun transshipment muhiim ah. Nidaamyadaas ka sokow, jidadka tareenka waa in sidoo kale la xusaa. Dalkeenna, waxaan ku leenahay shirkado leh awood maaliyadeed oo ay ku hawlgalaan howlahooda u gaarka ah iyo gaariyo ay leeyihiin xasiloonida gaadiidka tareenka. Sikastaba, waa xaqiiqo in aanu jirin wado tareen oo joogto ah oo u dhaxaysa dhamaadka bariga iyo galbeedka dalkeena. Gaadiidka tareenka, oo ah nooca bay'adda u nugul iyo gaadiid dhaqaale, ayaa horteena inaga ah bartilmaameedka lagu gaari karo waddankeenna.
TAARIIKHDA GUUD EE XUKUUMADUHUUUU FUDUDI DOONAYAA
kuwaas oo dhanna waxay horumar wanaagsan, iyo sidoo kale 2017-marka la eego warshadaha Saadka ee 2018 sano mid ka mid ah tallaabooyinka ugu muhiimsan 'deeqda dawladda waa in ay Eldener ku nuuxnuuxsaday, "ka dib markii UTIKAD warshadaha logistics dhex mara xidhiidhka aynu la xoojiyo Wasaaradda Dhaqaalaha ee dalxiiska ay awoodaan in ay u sheegto in ay tahay dhoofisaa labaad ee ugu weyn dalka Turkiga ayaa ka mid ah adeegyada . Natiijadii wadaxaajoodkeenna wadaagga ahaa, dhiirrigelinta qaybteena waa la furay. Sanadkii la soo dhaafay, waxaan ka qeybgalnay shirka loo yaqaan 'FIATA World Congress' oo lala yeeshay wefdiga ganacsiga ee ay dhidibtay UTİKAD iyada oo loo eegayo baaxadda taageerada cadaalad ah. Urur ahaan sannadkan, waxaan sii wadaynaa dadaalkeenna ah sidii aan u sameyn lahayn wafdi ganacsi. Sidan, waxaan sii wadaynaa inaan mataleyno waaxdaada logistics ee Turkiga oo aad uga awood badan dhulalka caalamka iyadoo uga mahadcelineysa dadaallada Wasaaradda Dhaqaalaha. Intaa waxaa sii dheer, shirkadahayadu waxay codsadaan Barnaamijka Taageerada Brand iyo Turquality iyagoo bixiya shuruudaha lagama maarmaanka ah. Waxaa mahad leh barnaamijyadan taageera, shirkadaha fuliya hawlo suuq geyn dibedda ah oo leh fursado xaddidan ayaa la soo bandhigi doonaa. Xaddiga ka-hortagga Jiritaanka ayaa dardar-galinaya sumcadda iyo koritaanka qaybta. Turkey siin doonaa aragti weyn ee brand ee suuqa caalamka. wakiilada warshadaha ayaa dhamaystiri doono horumarinta hay'adaha hay'adaha xoog leh, kaas oo ka mid ma aha oo kaliya taageero barnaamijka weyn wax uga tari doonaan in ay brand Turkey.
Sidaas, isdhexgalka caalamiga ah waxaa lagu gaari doonaa, waana arki doonaa in sanadaha soo socda sida ugu horraysay ee Turkey actor oo caalami ah in shirkado badan ee qaybta saadka. Sababtoo ah aqoonta iyo kartida tababaran ee waaxda saadka ee dalkeena ayaa ku filan. Waaxdeena, agaasimayaasha, oo mid walboo isu arka inuu yahay muwaadiniin dunida ah, oo raaca horumarka adduunka oo u furan horumarka, wuxuu si joogta ah u sii wadaa howlahooda. Noocan muhiimka ah ee aqoonta iyo aqoonta leh ee shaqada ee waaxda lojistikada waa fursad muhiim u ah waddankeenna. Dalkeenna, adeegyada saadka ayaa lagu bixin karaa heerar caalami ah. Qaab-dhismeedkan dhexdiisa, UTİKAD waxay ka shaqeysaa inay hubiso in xubnaheeda ay sii wataan howlahooda xaaladaha wanaagsan. Annaga oo ka shaqeyneyna metelaadda hay'adaha qaranka iyo kuwa caalamiga ah, waxaan sii wadnaa inaan mataleyno xubnaheena, gaar ahaan waaxda saadka ee Turkiga. ”
All hababka gaadiidka ee kalfadhi gaar ah looga hadlay arrimaha ku saabsan ajandaha Guddoomiyaha UTIKAD Emre Eldener, "Dhaqaalaha dalka Turkiga ka furmo suuqa of Direction in Dhaqaalaha iyo Digital Badalka" waxaa laga dhigay on Haguhu ugu weyn ee Kalfadhiga koowaad.
KA HADALKA LACAG LA'AANTA AY U SHAQEEYAAN HAMBALYADA DHAQAALAHA LACAG LA'AAN AH
Daadihinayey UTIKAD Board Member iyo Guddoomiyaha TÜRKLİM Ibrahim Dole uu "Point Turkey ee taas Freight Maritime Transport, Fursadaha iyo Caqabadaha" Guddoomiye Ku-xigeenka Guddiga ka qayb UTIKAD afhayeenka ah ee guddiga iyo Logistics Council Business DEIK Turgut Erkeskin, qaybta saadka laga hadlay xayiraadaha canshuurta. Erkeskin, Bakanlığı Wasaaradda Kastamyada iyo Ganacsiga oo ay soo saartay agaasinka guud ee kastamka 'khidmadaha kharashaadka garoonka' waxay ku bilaabatay wareeg, ka dib si loo soo afjaro wadahadaladii ordino ee waaxda waxayna sii wadatay codsiyada wareega wareega oo loo keenay waaxda logistics, 10 Maarso 2018 taariikhi ah Rasmi Gazette Sharciga Kanun wuxuu wax ka badalayaa shuruuc gaar ah oo ku saabsan hagaajinta deegaanka maalgashiga ”iyo qodobada sharciga. Iyada oo wax ka qabashadu aasaas u noqonaysa sharciga sharciga ah ee lagu dabbakhayo saqafka saqafka alaabada adeegga ee qabanqaabiyaasha Gaadiidka, maamulayaasha dawladdu waxay u keeneen khidmadda salka iyo saqafka qaybta gaadiidka, taas oo ah hawlo ganacsi. Si kastaba ha noqotee, u maleyn mayno in faragalinta dadweynaha ee mushaharka lagu go'aaminayo gudaha xorriyadda ganacsiga aysan sax aheyn. Wax ka qabadyada noocan ahi ma raacaan mabaadii'da dhaqaalaha xorta ah. Waxaan saadaalin karnaa in jawiga maalgashiga uu xumaanayo ka dib wax ka qabashadaan ..
Ekin Tırman oo ah xubin ka tirsan guddiga UTİKAD ahna gudoomiyaha gudiga wadooyinka ayaa wax ka badalay "Mashruuca Load Load iyo Energy Logistics" ee "Khatarta iyo Kiimikooyinka Saadka iyo Shirka ADR,, Turgut Erkeskin, gudoomiye kuxigeenka UTİKAD iyo DEEK Logistics Business Council. . UTIKAD Madaxweynihii hore ee Costa Rica iyo FIATA sharafeedka Member of seebab ah "Turkiga ee Railway Strategy hadda Xaaladda, Dhibaatooyinka iyo Solutions" taas oo uu si toos ah fadhiga ka wada hadleen.
XUQUUQDA UTİKAD AYAA LAGA HELAY
Casho sharaftii iyo xafladii abaalmarinta ee la qabtay shirkii kadib, shirkado badan oo UTİKAD ah ayaa sidoo kale la guddoonsiiyay. Mid ka mid ah shirkadaha xubinta ka ah UTİKAD, Sertrans International Transport Trade Inc. ayaa la guddoonsiiyay shirkadda Lojistik Logistics Company ee sannadka ödül, halka aasaasaha iyo milkiilaha shirkadda Barsan Global Logistics, Kamil Barl receivedn uu helay abaalmarinta Lojistik ee Ganacsadaha Sannadka ödül. Horoz Logistics Inc. waxaa la siiyay abaalmarinta Lojistik Logistics Beyond Borders ödül. Wada shaqeynta Borusan Lojistik Ford Otosan waxaa lagu abaalmariyay 'Mashruuca Saadka ee sanadka'. Anigoo ku hadlaya magaca Borusan Logistics, İbrahim Dölen, xubin ka tirsan guddiga UTİKAD, Gudoomiyaha TÜRKLİM iyo Maareeyaha Guud ee Borusan Lojistik, ayaa abaalmarinta ku muteystay Borusan Lojistik.
Kaaliyaha Duulimaadka Diyaaradda Turkishka ee Turhan Özen ayaa abaalmarinta 'Saadka ee Sanadka' ka helay madaxweynaha UTREAD Emre Eldener.
Gaadiidka Reibel iyo Ganacsiga Inc. Arif Badur, aasaasaha iyo Maareeyaha Guud, oo xubin hore uga ahaa Guddiga Agaasimayaasha UTİKAD, ayaa loo haystay inuu mudan yahay abaalmarinta Aaladda Yaşam ee Nolosha .. Badur wuxuu abaalmarintan ka helay Can Erel, Kuxigeenka Maareeyaha Guud ee Duulista Rayidka.
Turgut Erkeskin, Madaxweyne kuxigeenka Gudiga Agaasinka ee UTİKAD, Madaxweyne kuxigeenka sare ee FIATA iyo Gudoomiyaha Golaha Ganacsiga ee Dekada 'DEisticsK Logistics', ayaa helay 'Ka qeyb qaadashada Abaalmarinta sanadka ee abaalmarinta e. Abaalmarintan waxaa lasiiyay Erkeskin by Kosta Sandalcı, Madaxweynihii hore ee Gudiga Agaasinka UTİKAD iyo xubin sharafeedka FIATA.
Safarada Habeenkii waxay ka bilaabmeen Gaadiidka Dadweynaha ee Antalya